Cesc Fabregas Oo Kulankiisii Ugu Horreeyey Ee Kooxdiisa Cusub Ee Monaco Kula Damaashaaday Dhibic Muhiim Ah – Cadalool.com
Cesc Fabregas Oo Kulankiisii Ugu Horreeyey Ee Kooxdiisa Cusub Ee Monaco Kula Damaashaaday Dhibic Muhiim Ah
Cesc Fabregas ayaa kulankiisii ugu horreeyey xalay u saftay kooxda AS Monaco ee ka dhisan waddanka Faransiiska, waxaana uu ka caawiyey inay garoonka Tade Velodrone barbarro kula galaan Marseille.
Kooxda uu tababaraha ka yahay Thierry Henry ee Monaco ayaa toddobaadkii hore ku dhawaaqday heshiis ay la gashay Fabregas, waxaana uu qayb ka noqday safarkii kooxdiisu ugu tagtay Marseille, isaga oo kusoo bilowday shaxda koowaad.
Tababare Thierry Henry ayaa ka ciyaarsiiyey booska lambar 10, si uu u caawiyo weeraryahannada Aleksandr Golovin iyo Rony Lopes, waxaana uu garoonka ku jiray illaaa daqiiqaddii ugu dambaysay isaga oo muujiyey ciyaar qurux badan iyo in xirfaddiisu ay tahay mid sarraysa oo ay Chelsea ku qaldanayd inay u ogolaato inuu ka tago.
Kooxda garoonkeeda joogtay ee Marseille ayaa gool ku hor martay, waxaana daqiiqaddii 13aad u dhaliyey Maxime Lopez, hase yeeshee daqiiqaddii 38aad ayaa uu Youri Tielemans gool u beddelay kubbad uu ka helay Benjamin Henrichs, waxaana lagu kala nastay 1-1.
Qaybtii labaad, waxa bandhig ciyaareed wanaagsan mar kale muujiyey Fabregas, ugu dambayna waxay ciyaartu ku dhamaatay barbar-dhac 1-1.
Dhibicdan ay Monaco heshay ayaa waxay u ahayd mid muhiim ah maadaama ay ku jirto casaanka ama kaalinta 19aad, isla markaana ay afar dhibcood ka hoosayso naadiga kaalinta 17aad fadhiya, hase yeeshee imaanshaha Fabregas ayaa ka caawin kara kooxda Thierry Henry inay sare ugu soo ruqaansato kaalmaha sare oo ay ka badbaado inay heerka labaad u degto.